CUNUGGA UURKA: SIDA LOO OGAADO INTA MAALMOOD EE UURKA UU SOCDO IYO INTA UU QAADAN KARO - XOOLAHA
Uurka (uurka) ee lo'da: mudada, jadwalka, miiska
Buunshaha uurka waxay ubaahantahay fiiro gaar ah iyo daryeel, daryeel iyo quudin, maxaa yeelay maahan kaliya caafimaadkeedu si toos ah ugu tiirsan yahay tan, laakiin sidoo kale caafimaadka ilmaha uurjiifka ah.
Waxaan kuu sheegi doonnaa sida loo ogaado uurka uurka iyo sida loo daryeelo waqtigan adag.
Waa maxay lo'da lo'da micnaheedu?
Hadal ahaan, micnaheedu waa lo'da "uurka." Hase yeeshee, waxaa caado ah in loo yeedho codka haweenka uurka leh ee uurka leh, taas oo macnaheedu yahay "kubbasho". Si kale haddii loo dhigo, lo'da uurka ayaa ah lo'da lagu guuleystay bacriminta qaab dabiici ah ama dabiici ah.
Muddada uurka ee lo'da
Bilowga uurka waa bacriminta guuleysta, dhammaadka waa dhalmada guusha leh. Waxaa la rumeysan yahay in geeddi-socodka qaansaradu uu soconayo sagaal ilaa toban bilood, celcelis ahaan sagaal iyo bar bilood. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa in laga yaabo in hal dhinac ama mid kale, oo waxaan kuu sheegi doonaa wax badan oo ku saabsan arrintan.
Ma taqaanaa? Waxaa jira aduun dhan hal bil oo ah lo'da adduunka.
Imisa maalmood ayaa caadi ah
Muddada uurka caadiga ah waa 285 maalmood. Laakiin xilligani waa qiyaas, iyo sidoo kale naaso kale, lo'da, sababo kala duwan sababo kala duwan, waxay dhalin karaan xilligii caadiga ahaa.
Immisa ayey u guuri karaan
Waxaa suurtogal ah in lagu wareejiyo midhaha lo'da haweenka muddo ka badan dhowr maalmood ama toddobaadyo. Xaaladaha noocaas ah, uurku wuxuu kordhi karaa 311 maalmood.
Sidee loo ogaan karaa lo'da uurka ama ma
Waxaa jira habab badan oo lagu ogaanayo uurka. Waxaa loo qaybin karaa hababka guriga iyo qaababka iyadoo la isticmaalayo habab farsamo.
Bishii kowaad kadib markii la goynayo
Bisha kowaad ee kalluunka kadib, si loo ogaado uurka uumiga ah ma aha mid aad u adag. Tani waxaa lagu muujiyey dhowr calaamado dibadda ah:
Qaadku wuxuu bilaabay inuu si degan u dhaqmo, waxay lahayd hurdad, laakiin waqti isku mid ah digniin.
Waxay hagaajisay rabitaankeeda.
Ha sameynin buuqa oo ha u yeedhin dibiga.
Dhiig-celinta shahwada waxay ka muuqaneysaa xubnaha taranka dibadda ee lo'da.
Suunka ayaa noqda mid cidhiidhi ah, waana mid adag, jidhka oo adag.
Waa muhiim! Marka lo'da ka dib waqti cayiman ka dib markii mar labaad la muujiyo welwel, waxay bilaabmaysaa kulaylka - bacrinta ayaa ku fashilantay.
Dhamaadka bilaha ka dib marinnada
Muddadaas, qalab gaar ah ayaa loo baahan yahay si loo ogaado uur. Isbeddeladu waxay ka dhacaan dhiigga lo'da - qaddarka hoormoonku wuu ka duwan yahay. Tijaabada dhiigga ee ku haboon waxay muujinaysaa bilowga uurka. Hab kale oo farsamo oo lagu ogaanayo uurka waa ultrasound. Laakiin xitaa halkan waxaa jira wax u gaar ah - ultrasounds waxaa la sameeyaa ugu yaraan soddon maalmood ka dib markaad ku biirto. Haddii ka hor, dhicin ayaa la kicin karaa.
Waa muhiim! Haddii muddada saddexda bilood ee dhalmada ka dib ay jirtey mijo, baaritaanku ma muujin doono xaalada dhabta ah: habka hormoonada ee dhiigga ee lo'da saddex bilood ka dib dhalmada ma beddelo.
Sidoo kale isticmaal xariijimo gaar ah, baaritaanka uurka ee lo'da.
Goob gaar ah oo lagu qeexayo uurka waa habka saxda ah. Nuxurka habkan ayaa ah in xoolo-yaqaan xoolo khibrad leh ama dhakhtarku uu baaro ilmo-galeenka iyada oo la baarayo iyada oo loo marayo derbiyada malawadka. Waxaa lagu sameeyaa nadiif ah (iyada oo aan lahayn boogo iyo ciddiyo fiiqan) gacmaha, iyada oo aan la isticmaalin gacmo gashi, ama jilibku waa inuu ahaado nasasho. Iyada oo la adeegsanaayo baaritaanka malawadka ayaa go'aamisa:
Isbeddelka cabbirka ilmo-galeenka.
Nooca unugyada taranka.
Meeleynta ku taala peritoneum.
Waxay sidoo kale baarayaan luteumka jirka (marxaladaha hore) iyo baaritaanka makaanka afkiisa.
Waxaa jira habab loogu talagalay is-goosashada uurka, iyada oo aan ku lug laheyn xoolaha. Tani waxay baadhaysaa caloosha caloosha iyo falanqaynta caanaha. Laakiin waa in la ogaadaa in nidaamyadani ay wax ku ool yihiin marka si habboon loo dabaqo.
Waxaan kugula talineynaa in aad wax ka barato nooca ugu fiican ee lo'da.
Qufaca ubaxa caloosha Habka la heli karo oo kaliya in uu yahay mid soo jiidasho leh, dhaqdhaqaaq yar oo taxaddar la'aan ah wuxuu dhaawici karaa uur-kujirka. Baaritaanka waxaa la sameeyaa subaxii hore, on calool madhan oo xayawaanka ah. Baaritaanka caanaha Marka aad guriga joogtid, qadar yar oo caano ah waa in lagu daraa qadarka isku midka ah ee khamriga. Haddii wakhti ka dib caanaha la gooyo - tani waxay noqon doontaa tilmaame ah oo lagu guuleysto. Ama hab kale: u nadiifi biyo dhexdhexaad ah oo qabow qabow iyo hoos u dhig caanaha nadiifka ah ee la nadiifiyey. Haddii uu dhibicu ku soo noqo meel bannaan oo caddaad u eg, lo'du wuxuu noqonayaa lo'da; haddii dhibicdu ka dillaacdo, natiijadu waa wax xun.
Ma taqaanaa? Lo'da nolosheeda oo dhan waxay bixisaa 200,000 koob oo caano ah.
Jadwalka uurka iyo dhalmada
Kalandarkaan waxaa loo adeegsadaa in lagu xisaabiyo waqtiga qiyaastii dhalashada ee Dibiga iyo bixinta lo'da ee daryeelka lagama maarmaanka ah. Intaa waxaa dheer, isticmaalka jadwalka ayaa sidoo kale kaa caawin doona go'aamin marka ultrasound la samayn karo on lo'da, taas oo maalmaha isbeddelka la sameeyo in la sameeyo iyada cunto iyo wixii la mid ah.
dhoobo Waqtiga dhalmada Waqti
dhoobo Waqtiga dhalmada
bisha lambarka bisha lambarka bisha lambarka bisha lambarka
Janaayo 01 october 12 Julaay 05 april 16
Janaayo 11 october 22 Julaay 15 Abriil 25
Janaayo 21 November 01 Julaay 25 May 05
Janaayo 31 November 11 Ogosto 04 May 15
Febraayo 10 November 21 Ogosto 14 May 25
Febraayo 20 Diseembar 01 Ogosto 24 june 04
Maarso 02 Diseembar 11 Sebtembar 03 june 14
Maarso 12 Diseembar 21 Sebtembar 13 june 24
Maarso 22 Diseembar 31 Sebtembar 23 Julaay 04
april 01 Janaayo 10 october 03 Julaay 14
april 11 Janaayo 20 october 13 Julaay 24
april 21 Janaayo 30 october 23 Ogosto 03
May 01 Febraayo 09 November 02 Ogosto 13
May 11 Febraayo 19 November 12 Ogosto 23
May 21 Maarso 01 November 22 Sebtembar 02
May 31 Maarso 11 Diseembar 02 Sebtembar 12
june 10 Maarso 21 Diseembar 12 Sebtembar 22
june 20 Maarso 31 Diseembar 22 october 02
june 30 april 10 Janaayo 01 october 12
Jadwalku ma bixin karo taariikhda saxda ah ee dhalmada - waxaa jira had iyo jeer qalad qadar ah, taas oo ay sababaan arrimo kala duwan, sida tan: dhalmada kowaad ama lo'da horey u dhalatay; Cawska Burenka, da'diisa, iwm.
Hase yeeshee, ha ahaato sida ay tahay, jadwalku wuxuu ka caawinayaa ururka iyo fulinta xannaanada saxda ah ee xayawaanka.
Waxaa jira saddex weji oo marxaladood oo uur ah oo ku jira cunnooyinka:
Marxaladda Jarmalka. Ugu gaaban. Waxay ku bilaabataa bacriminta ukunta waxayna dhammaataa daqiiqad ah ku xirnaanta zygote ee derbiga ilmo-galeenka.
Wajiga Embryonic. Bilowgeeduna waa daqiiqad ah in la geliyo qashin-xayawaanka derbiga uterineine. Muddada wajigani waa laba bilood. Xilligan, dhammaan nidaamyada jirka - nidaamka dareemayaasha, habka wareegga, habka unugyada ee wareega dhiigga - qaabka jirka, muruqyada iyo muruqyada, iyo xubnaha gudaha ayaa lagu sameeyaa embriyaha. Marxaladda embriyaha waxay ku dhammaataa dhismaha mandheerta.
Wejiga uur-jiifka. Cabbirka miro-kor u kaca ayaa sii kordhaya, hagaajinta iyo dhammaan nidaamyadeeda ayaa la horumariyaa ilaa dhammaadka. Heerku wuxuu ku dhamaanayaa dhalmada.
Ma taqaanaa? Cows waxay dareemaan beerta magnetic Earth - waxay ku yaalliin inta lagu nasanayo oo kaliya qadadka xoogga ah ee garoonka.
Daryeelka iyo cunnooyinka lo'da uurka leh
Daryeelka haboon iyo quudinta isku dheeli tiran ee lo'da uurka waxay xaqiijin doontaa nadiif caafimaad qaba, nuujin wanaagsan iyo qadarka caanaha ee lagama maarmaanka ah. Tixgeli sifooyinka daryeelka oo ka bilow diyaargarowga hore ee dhalmada.
Sababta diyaargaroobiddu waa xannaano ku habboon xayawaanka uurka leh. Waxaa lagama maarmaan ah in la bixiyo xaalado wanaagsan iyo quudinta, oo lagu kobciyo fiitamiinada iyo macdanta lagama maarmaanka ah. Waqtiga ay qaadatay lo'da cawska ayaa yaraaday - si looga fogaado isticmaalka xad-dhaafka ah ee cayayaanka, laakiin waa inay ahaataa hawo nadiif ah, iyada oo dibedda ay tahay mid faa'iido leh:
Thanks to bixinta caadiga ah ee oksijiinta, wareegga dhiigga ee jirka wuxuu noqonayaa mid ka fiican.
Socodka, xayawaanku wuxuu hagaajiyaa muruqyada wuxuuna xoojiyaa qalabka geedka, kaas oo aad u muhiim ah ka hor dhalmada.
Jimicsiga "jimicsiga" wuxuu jidhka ku daraa calciferol, taas oo muhiim u ah xoojinta lafaha ciridka uurka leh iyo uurjiifka.
Waxaanu kugula talineynaa in aad ku baraarugto dareenka daaqa ee daaqa.
Inta lagu jiro xilliga qallalan (dhammaadka nuujinta iyo ilaa dhalmada cusub) quudinta waa in la sameeyaa iyadoo la raacayo jadwal, ka dib marka la qaato cunto gaar ah oo leh xaddiga kordhinta borotiinka, fitamiinnada, macdanta iyo dufanka saameeya nuujinta iyo caanaha. Waxa kale oo muhiim ah heerkulka, hawo wanaagsan iyo cabitaanka wakhtiga loogu talagalay.
Hoos waxaa ku qoran qiyaas qiyaasta qallalan oo qallalan oo leh miisaan nool oo ah 500 kg, qiyaasta caanaha ee 4000 kg oo caano ah oo leh 4% dufan:
Cunto Qodobo (kg) Waxay ka kooban yihiin
Unugyada quudinta Dareemidda
borotiinka (g) Calcium (g) Fosfooraska (g) Carotene (mg)
Silo 15 3,00 210 23 83 225
Mawduuc cagaaran 6 2,52 288 36 13 90
Cawska guga 2 0,62 28 8 2 3
Keega sunflower 0,7 0,77 277 3 7 1
Sare qoorta 1,5 0,10 195 2 15 6
Cunto quudinta 0,10 - - 26 17 -
Bur bursan 1 - - - - 80
Waxa loo baahan yahay xeerka 8,01 998 98 62 405
Inta lagu jiro horumarka, uurjiifku wuxuu u baahan yahay macdan iyo fitamiinno tiro badan. Iyadoo kororka ereyga iyo uurjiifku uu kordho, sidaa daraadeed, waxay u baahan tahay nafaqo badan oo badan.
Quudinta lo'da ka hor dhalmada
10-15 maalmood ka hor taariikhda suurtogalka ah ee dhalmada, lo'da waxaa loo wareejiyaa si ay uga quudiso hay "tayo sare leh oo laga soo bilaabo firileyda, iyo quudinta diirimaad ee cuntada oo dhan waa la wada saarayaa ama ka tagay qadar aan ka badnayn hal kiilo maalintii. Sidoo kale cuntada laga reebo cuntada suunka ah - dareeraha jidhka iyo sidaas oo kale. Ha ilaawin qiyaasta walxaha raadinta, tusaale ahaan, calcium wuxuu u baahan yahay 9-10 g maalintii, iyo fosfooraska - 7-8 g.
Dhanka kalkaalinta dhalmada, raashinka quudinta waxaa loo sameeyaa qaabka soo socda:
Silage iyo cawska - 60%.
Nafaqada guud - 24%.
Cunto khafiif ah - 16%.
Baro naftaada qaababka lo'da qalalan.
Tani waa saamiga ugu sarreeya ee quudinta ka hor dhalmada. Isagoo ka hadlaya qiyaasta maalin kasta ka hor dhalmada, waxaan ognahay in lo'da u baahan yahay 10 kg oo caws ah. Haddii sabab kasta ay macquul tahay in la siiyo wax badan, waxay bixiyaan wax ka yar, laakiin ku dar faytamiin diyaar ah oo ku saabsan talooyinka dhakhtarka xoolaha. Quudinta ayaa la qaadaa saddex jeer maalintii, sidoo kale waxay waraabisay saddex jeer, oo keliya biyaha la sifeeyay ama la karkariyey heerkul ah 8-10 ° C. Marka lagu daro feedhaha lagu taliyey, hubi inaad bixiso 30 illaa 50 g oo cusbo ah iyo jeeso. Inta lagu jiro muddada ugu horreysa ee qalalan (60 ilaa 20 maalmood ka hor dhalmada), raashinka waa in lagu daraa fiber iyo kaliya tufaax cusub oo tayo leh oo aan lahayn jajabyo iyo caagyo waa in la siiyaa. Fikrad gaar ah waa in la siiyaa miisaanka jidhka ee xayawaanka - waa inaysan isbeddelin, haddii loo baahdo, cuntada ayaa lagu kordhay quudin nafaqo leh.
Waa muhiim! Wakhtiga qalalan, alfalfa iyo juusleerka cuntada ee lo'da looma ogola!
Inta lagu jiro xilliga labaad ee qalalan, cunnooyinka lo'da wax badan isbeddel maaha, oo udhaxeysa dhalmada, si ay u buuxiso hoos u dhigga tamarta, lo'da waxay ku daraan fiber iyo fitamiino badan.
Si toos ah u quudinta aroosyada dhalmada
Saddex isbuuc ka hor dhalmada si loo hagaajiyo tayada iyo tirada caanaha, quudinta ayaa lagu fuliyaa nidaamkan:
21-14 maalmood ka hor dhalmada u gudbinta quudinta ayaa la qaadaa saddex jeer maalintii, iyada oo 2 kg kasta oo ah feedka ugu weyn uu la qasay 1 kg oo isku dhafan.
14 maalmood ka hor muuqaalka ilamaha, 2 kg ee quudinta ugu weyn waxaa la siiyaa saddex jeer maalintii, oo intaa dheer, 1 kg oo diirran ayaa lagu daraa subaxdii iyo fiidkii, iyo 2 kg oo udubdhexaad ah.
Inta lagu jiro usbuuca ugu dambeeya - 2 kg cuntada ugu weyn iyo 2 kg oo diirada saaraya quudin kasta.
Dhanka kale, waa in la ogaadaa sifooyinka quudinta lo'da uurka xilliga jiilaalka. Inta lagu jiro muddadan, cuntada waa in lagu kordhiyaa nafaqada iyo fiitamiinada. Iyada oo ay ka mid tahay waxyaalaha lagu daro, saliidda kalluunka, khamiirka cawska iyo fitamiinada gaarka ah ayaa la isticmaalaa. Sidoo kale cuntadu waa inay ahaato cadaan iyo cake.
Maqnaanshaha gaaban ee maaddooyinka qaarkood waxaa magdhow u ah xayawaanka si bilaash ah loo helo miiska miiska iyo laanta dhirta cagaarka ah (doorbidayo geed).
Ma taqaanaa? Hal daqiiqo gudahood, lo'da ayaa daan ka dhigta illaa 100 dhaqdhaqaaq.
Cudurada iyo dhibaatooyinka waqtiga uurka
Xilliga uurka, jidhka lo'da ayaa si gaar ah ugu nugul cudurrada waxaana suurtagal ah in aan hore u sii ogaanno meesha iyo waxa ay noqon doonto khatarta. Sidaa darteed, ka hortagga cudurka ayaa horay usocda.
Waxaa ka mid ah tallaabooyinka ka hortagga ah lagu aqoonsan karo:
Quudin ku habboon xayawaanka, oo lagu kobciyay fiitamiin, haddii loo baahdo - cirbadaha iodine iyo waxyaabo kale oo muhiim ah, sida daroogada sida Sedimin iyo Chectonica, Calaf D3.
Ka shaqee qashinka lo'da si ay uga takhalusaan dulin.
Ka qaadista dirxiga qamriga iyo kiniinnada (tusaale ahaan, Ivermek ama Ivermectin).
Haddii lo'da ay qaadatay cudurka, waxay muujin doontaa calaamadaha dibadda. Haddii dheefshiidka uu saameeyo, xayawaanku ma cuni doono, waxaad yeelan kartaa saxaro dabacsan iyo colic, oo laga yaabo inay lumiso mindhicirka weyn. Haddii habka neefsashadu uu saameeyo, waxaa jiri doona xiiq, qandho iyo qandho ka imanaysa feedhaha. Cudurrada faafa, xakamaynta iyo brucellosis waa in la ogaadaa, kan ugu dambeeya waa kan ugu khatarta badan - waa mid si xun u saameynaya lo'da iyo xanuunka uur-ku-taagga.
Dhibaatooyinka ugu caansan ee lo'da inta lagu guda jiro xilligaan waa:
Burburinta dhirta ama unugyada xayawaanka ku jira unugyada, kala jajabinta, mummification ee uurjiifka.
Isku-darka dheecaanka ee ku jira uur-jiifka ama xuubka uurjiifka.
Soo bixitaanka siilka.
Isku dhejinta ilmo-galeenka.
Akhri sida loo daweeyo bararka cunnooyinka ee lo'da iyo sababta ay u jirto dheecaan cad oo ku jira lo'da.
Dhibaatooyinkaasi aad ayay u khatarsan yihiin, sidaa daraadeed calaamadaha ugu yar waa inaad isla markiiba la xiriirtaa dhakhtar xoolaad. Sida gargaarka degdegga ah, waxaa ugu wanaagsan in marka hore la tashato dhakhtar xoolaad ka dibna u dhaqmo si waafaqsan tilmaamaha. Xitaa dhalatada ugu khibrad badani ma awoodi doonto inay beddesho takhasus takhasus leh.
Inta lagu jiro uurka, lo'du wuxuu u baahan yahay dareenka aadanaha ugu badan. Daryeel, taxadar joogto ah iyo daryeel habboon ayaa hubaal ka dhigi doonta mid wanaagsan iyo caafimaadka xayawaanka.
Ka hor inta aanad bilaabin lo'da, waxaan isku dayaa sidaan oo kale: Ilmahayga ayaan maalin kasta ku quudiyaa, laakiin ma siinayo in la cabbo. Habeenkii waxaan u oggolaanayaa in ay tagto biyaha oo aan gacanta ku hubiyo dhinaca midig, oo yareynaya, haddii ay ka yartahay 7 bilood, way muuqan doontaa dhinaca, gaar ahaan haddii biyaha qabow yahay.